Kuboshwe ababili kulandela esokudubula kuvulwa iMall eGoli | News24
Kuboshwe ababili kulandela esokudubula kuvulwa iMall eGoli
Johannesburg - Kuboshwe amadoda amabili asolwa ngokubadakanyeka esigamekweni sokudubula esenzeke eSprings Mall namuhla (ngoLwesine)ekuseni.
Ngokombiko we-Springs Advertiser la madoda aboshwe lingakapheli nehora kwenzeke isigameko.
Imenenja yale nxanxathela yezitolo ithe sibashaqisile isigameko ikakhulukazi njengoba izinga lokuphepha beliphezulu ekuseni.
UKathryn Payton weMarketing Concept uthe bekunamaphoyisa angaphezu kuka-200 endaweni, bekukhona nabengawufakile umfaniswano, kukhona ngisho nawakwaMasipala waseKurhuleni, onogada beMall kanjalo nonogada benkampani ezimele.
OLUNYE UDABA: Kuqhume isibhamu kwalimala inqwaba kuvulwa iMall eGoli
Izibhamu ziqhume ngemuva kokuvulwa kwale ndawo, nakuba kunjalo isigameko asizange sibaxoshe abathengi njengoba bebelokhu bethelekile.
IKempton Express ibike ukuthi oweNetcare911 uChris Botha uthe kulimale abantu ababili esigamekweni.
"Imibiko iveza ukuthi bekubanjwa inkunzi imoto yemali. Abezimo eziphuthumayo bafike endaweni yesigameko bathola ukuthi kulimale abantu ababili. Abosizo lokuqala basebenze ngokuzikhandla ukunikezela ngosizo lwezempilo kwabalimalile," kusho uBotha.
"Oyedwa walabo abalimalile uphuthunyiswe esibhedlela esiseGauteng ngendiza enophephela emhlane. Omunye uphuthunyiswe nge-ambulensi esibhedlela esiseduze," kusho uBotha.